Korintofo I 12 NA-TWI - Honhom Kronkron no akyɛde - Me nuanom, - Bible Gateway
Korintofo I 11Korintofo I 13
Korintofo I 12 Nkwa Asem (NA-TWI)
12 Me nuanom, merebɛkyerɛ mo nsɛm a ɛfa Honhom Kronkron no akyɛde no mu. Anuanom, mepɛ sɛ muhu nokware no. 2 Munim sɛ bere a na moyɛ abosonsomfo no na ahoni a awuwu na edi mo so de mo kɔ bɔne mu. 3 Nea ɛsɛ sɛ mote ase ne sɛ, obiara a Onyankopɔn Honhom nkyerɛ no kwan no ka se, “Nnome nka Yesu!” Na wɔn mu biara ntumi nsi no pi sɛ, “Yesu yɛ Awurade,” gye sɛ Honhom Kronkron no kyerɛ no kwan.